ညီမတို့ ၇တန်း၊၈တန်းလောက်က ရုပ်ရှင်ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူး…… – Media9
ဆယ်လီ ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် အနုပညာ အမေးအဖြေ
ညီမတို့ ၇တန်း၊၈တန်းလောက်က ရုပ်ရှင်ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူး……
September 16, 2019 media9Comment(0)
အခုက ရုပ်ရှင်တစ်ခေတ်ပြန်ပြီးအောင်မြင်လာတာ အရမ်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ ‘စဝ်ယွန်းဝတီဦး’….
ညီမတို့ ၇တန်း၊၈တန်းလောက္က ရုပ်ရွင္ဆိုရင် တော်ရုံတန်ရုံဘယ်သူမွမကြည့်ကြဘူး……
အခုက ရုပ်ရွင္တစ်ခေတ်ျပန်ျပီးအောင်ျမင္လာတာ အရမ်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ္လို့ဆိုတဲ့ ‘စဝ်ယြန်းဝတီဦး’….
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗွီဒီယို သတင်း အမေးအဖြေ
February 3, 2020 media9
[Unicode] “ကနြျးမာရေးမကောငျးလို့ဘယျလိုပဲနနေအေမအေိမျဦးခနျးမှာရှိတာကိုကမငျ်ဂလာတဈပါးပဲလေ။သားသမီးမကြျနှာလေးမွငျလိုကျရလို့အားတှဖွေဈသလို အမေ့ရဲ့မကြျနှာကိုမွငျလိုကျရတဲ့အခါမှာလညျးအားဖွဈတယျ”လို့ပွောပွခဲ့တဲ့ ‘ခငျဇာခွညျကြောျ’… [Zawgyi] “ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ဘယ်လိုပဲနေနေအမေအိမ်ဦးခန်းမှာရှိတာကိုကမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလေ။သားသမီးမျက်နှာလေးမြင်လိုက်ရလို့အားတွေဖြစ်သလို အမေ့ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာလည်းအားဖြစ်တယ်”လို့ပြောပြခဲ့တဲ့ ‘ခင်ဇာခြည်ကျော်’…
Lush magazine ၂နှစ်ပြည့် မှာ အလန်းစားဖက်ရှင်နဲ့တွေ့ရတဲ့ချမ်းမင်းရဲထွဋ်
October 5, 2019 media9
[Unicode] မိဘက သရုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး နိုင်ငံတောအကျိုးပြုဇာတ်ကား အခုမှစရိုက်ဖူးတာပါ။ နိုင်ငံတော်အကျိုးပြု ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုဏ်ပြုကားမို့လို့ကျနော်လက်ခံလိုက်တာပါ။ [Zawgyi] မိဘက သရုပ္ေဆာင္လုပ္ဖို ့ဖိအားေပးတာမ်ိဳးမရိွပါဘူး နိုင္ငံေတာအက်ိဳးျပဳဇာတ္ကား အခုမွစရိုက္ဖူးတာပါ။ နိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျပဳ ရဲတပ္ဖြဲ ့ဂုဏ္ျပဳကားမို ့လို ့က်ေနာ္လက္ခံလိုက္တာပါ။
ဆယ်လီ ပြည်တွင်း ဗွီဒီယို သတင်း အနုပညာ အမေးအဖြေ
ဂန်ဓဗ ရုပျရှငျအကွောငျးပွောပွလာတဲ့ ခငျဇာခွညျကြောျ…
February 5, 2020 media9
[Unicode] ဒီဘကျခတျေက ရိုကျကူးရတာနဲ့အမြားကွီးကှာခွားသှားပါပွီ။ မှားရငျလဲပွနျရိုကျလို့ရတယျ။ အရငျကဆိုဖလငျကို ငှဲ့နရေတယျ။ ကိုယျတှခေတျေတုနျးကမြား ခုလိုမြိုးသာဆိုဘယျလောကျမြားကောငျးလိုကျမလဲလို့ပွနျတမျးတမိတယျ [Zawgyi] ဒီဘက်ခေတ်က ရိုက်ကူးရတာနဲ့အများကြီးကွာခြားသွားပါပြီ။ မှားရင်လဲပြန်ရိုက်လို့ရတယ်။ အရင်ကဆိုဖလင်ကို ငှဲ့နေရတယ်။ ကိုယ်တွေခေတ်တုန်းကများ ခုလိုမျိုးသာဆိုဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်မလဲလို့ပြန်တမ်းတမိတယ်
အိန္ဒိယကဇာတ်ညွှန်းကိုဝယ်ပြီး ‘ညစ်တွန်း’အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ‘လူမင်း’……